Iifenitshala zasekhaya zesiqhelo, abavelisi befanitshala bokutya | Ifanitshala yeNuTrend
I-6 Tier Contemporary Metal kunye neTafile yeencwadi zeWood zoGcino 502145
1. Amanqanaba ama-6 eTier Contemporary Metal kunye neWood Bookshelf yoGcino.Ubukhulu: L30xD30xH162cm / 11.8 '' x11.8 '' x63.8 ''.3. Isakhelo esomeleleyo sesinyithi ekugqibeleni okumnyama sinika ukuma okuqinileyo kunye nenkxaso elungeleleneyo.4. Iishelufu zomthi omnyama zenza imbonakalo yemizi-mveliso kunye neerustic.5. I-X-stretchers izisa ukubonakala kwe-chic okuthintela iincwadi ukuba zingawi.6. Ingena ngokugqibeleleyo nakweyiphi ikona ukunceda ukusebenzisa indawo yegumbi ngokufanelekileyo.
I-4 yeTier Contemporary Wood Bookshelf yoGcino 502160
1. 4 Itheyibhile yeTafile yeThutyana yeTafile yoGcino.2. Ubungakanani: L80xD29xH120cm / 31.5 `` x11.4 '' x47.2 ''.3. Amanqwanqwa aphezulu ebanzi anika yonke indawo oyifunayo.4. T25mm elingqingqwa beveled umphezulu uhombiso iprofayili.5. Imilenze eyomeleleyo engama-40x25mm inika inkxaso elungeleleneyo yokuhombisa ekhaya.6. IiX-stretcher zangoku zizisa ukubukeka kwekhaya kunye nokuthintela iincwadi ukuba zingawi.7. Ubungakanani obulungele ukugcinwa naphina.
Itafile yeKhonsoli yeNkuni emfutshane yeNkuni kunye neeDraws zeFenitshala yeGumbi lokuhlala 203505
1. Itafile yeKhonsoli yeNkuni eNcinci yeKhonkco eneeDrawer zefanitshala zeGumbi lokuhlala.2. Ubukhulu: L86.6xD30xH80cm / 34.1 `` x11.8 '' x31.5 ''.3. Yenziwe nge-MDF ngepeyinti enobubele.4. Izakhelwe ngezinto zokuhombisa ezimbini ezolukiweyo u-A.5. Ininzi indawo yokugcina ngenxa yeedowuli ezimbini eziphangaleleyo kunye nendawo ezimbini ezishelifini.6. Iyafumaneka kumhombiso owenziwe ngokwahlukeneyo kumacala omabini.
Itheyibhile yesofa ekwahlukile yesaliti yegumbi lokuhlala 203367
1. Itafile ekhethekileyo yesofa yeAccent yeSofa kwigumbi lokuhlalaUbukhulu: L45xD35xH60cm / 17.7 '' x13.8 '' x23.6 ''3. Isiciko se-oki se-oki se-T25mm esihle esizalisa ngokugqibeleleyo umzimba opeyintiweyo omhlophe4. 4.5 * 4.5cm Imilenze eshinyeneyo yokwakha esemgangathweni kunye nokuma okuqinileyo5. Ininzi indawo yokugcina ngenxa yedrawer edibeneyo kunye nendawo ebanzi yeshelufu6. Ifaka iidrafti ezicothayo ezicothayo kunye nezilayida ezomeleleyo zentsimbi kunye nezibambo.7. Uyilo oluhle ngokwendabuko, Isikimu sombala weethoni ezimbini, Icandelo loluhlu lwe-AIX.
FUMANA UKUZE UFUMANE US
Shiya nje i-imeyile yakho okanye inombolo yefowuni kwifom yoqhakamshelwano ukuze sikuthumele isicatshulwa simahla kuluhlu lwethu olubanzi lokuyilwa!